सभामुख Archives - Page2of4- Nepalpatra
राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान : सभामुखको छैन अत्तोपत्तो
२४ मंसिर, काठमाडौं । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन् । मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गते दिउँसो ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) […]
२५ कात्तिक, काठमाडौं । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेले नयाँ सभामुख चयनका लागि सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने शर्तसहित राजीनामा दिन आफू तयार रहेको बताएकी छन् । नेकपाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा मात्र पद लिनसक्नेछ । एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । उपसभामुखले […]
सभामुख पदमा काँग्रेसको दाबी
५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख पदमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताएका छन् । लेखकले सभामुख र उपसभामुख पदमध्ये एक पद आफ्नो पार्टीले नपाए मान्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।
काठमाडौं । यौन दुर्व्यवहारको आरोपित निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका डिएसपी दुर्गाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । महरा विरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता अनुसार मुद्दा चलाउन प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा बुझिएको छ । महराले असोज १४ गते […]
१७ असोज, काठमाडौं । नेकपाले सभामुख पद नछोड्ने भएको छ । कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि रिक्त सभामुखमा आफ्नै पार्टीका सांसदलाई बनाउन नेकपाले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ । ‘सभामुख पद छोडने कुरै हुँदैन,’ नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘उपसभामुख कांग्रेस वा अन्य दललाई दिएर भए पनि नेकपाले सभामुख पद छोड्दैन ।’ संविधानविद् एवं […]
१६ असोज, काठमाडौं । संघीय संसद्की महिला कर्मचारीमाथि यौनदुव्र्यवहार गरेको आरोपमा सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने बहस सुरु भएको छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नेकपाले सम्हाल्दै आएको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद त्याग्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बुधबार सूचना जारी गरी सभामुख पद रिक्त भएको […]
संसदको वेबसाइटबाट कृष्णबहादुर महराको नाम हटायो
१५ असोज, काठमाडौं । सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महराको नाम संसद सचिवालयले वेबसाइटबाट हटाएको छ । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि महराले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेसमक्ष मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । उपसभामुखको निर्देशनअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २११ को उपनियम २ अनुसार महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको सूचना संसद सचिवालयमा टाँसिए सँगै संघीय संसदको प्रतिनिधिको वेबसाइटबाट महराको […]
पत्रकारिता क्षेत्रलाई विश्वसनीय र स्वतन्त्र हुन चुनौती छ : सभामुख महरा
३ असोज, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक हकअन्तर्गत बनेका विधेयकमा व्यापक छलफल भएको बताउनुभएको छ । नयाँ मिडिया प्रालिले आजदेखि शुभारम्भ गरेको नयाँपाइला अनलाइन (www.nayapalia.com) को शुभारम्भ गर्दै सभामुख महराले भन्नुभयो, “सङ्घीय सदनले मौलिक हकसितसम्बन्धी १६ वटा विधेयक पारित ग¥यो, पारित प्रक्रियामा व्यापक छलफल भएको छ ।” संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समय […]
२७ भदौ, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो पाँच दिने चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक र फलदायी भएको बताउनुभएको छ । स्वदेश फर्किनुभएपछि उहाँले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी हित एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । तिब्बत भ्रमणका अवसरमा सभामुख महराले चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका पार्टी प्रमुख वु […]
८ साउन, नेपालगञ्ज । संघीयसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकको राजनीतिक विवाद संविधान निर्माण भएपछि सकिएको बताउनुभएको छ । यहाँस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको हातामा नयाँ निर्माण हुने क्याम्पस भवनको आज शिलान्यास गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब मुलुक बनाउन सरकार र सबै राजनीतिक दलको गतिशीलता देखिनु जरुरी छ ।” सभामुख महराको थप भनाइ थियो, “मुलुक बनाउन अहिले पनि […]
१८ असार, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को विशेष र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको विषयमा जवाफ दिने व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयको बैठकपछि उहाँले सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले गम्भीर विषय उठाउँदै आउनुभएको छ, त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीबाट होस् भन्नुभयो । सभामुख महराले भन्नुभयो– “सांसदहरुले गम्भीरताका साथ विषयवस्तु […]
सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण
४ जेठ, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सभामुख महराले देशका विभिन्न स्थानमा महिला हिंसा बढेको, बाढीपीडित र भूकम्पपीडितले उचित राहत नपाएको जस्ता विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सो विषयमा सरकारको धारणा माग्नुभयो । सांसदहरुको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन गर्न सभामुख महराले […]
३ जेठ, रोल्पा । रोल्पामा सञ्चालित प्रथम सभामुख कप भलिबल प्रतियोगिता बुधबार सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब प्रथम भएको छ भने महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जित हासिल गरेको छ । बुधबार बिहान सम्पन्न फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको हो । […]
प्रदेश नं ७ लाई देशकै नमूना बनाउँछु : सभामुख थापा
२७ वैशाख, बझाङ । भेटघाटका लागि गृहजिल्ला बझाङ पुग्नुभएका प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आफ्नो प्रदेशलाई देशकै नमूना बनाउने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखाले गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा सभामुख थापाले जनतामुखी बजेट ल्याइने बताउनुभयो । “गाउँको विकास भए मात्र देशको विकास हुन्छ । हिजो सिहंदरबारको मुख ताकेर बसेका जनतालाई अहिले […]
२६ वैशाख, काठमाण्डौ । सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलियाना बी टेप्लिजले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा दुई देश बीचको मित्रता, आपसी सहयोग, सहकार्य र संसदीय मैत्री संघ लगायतका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । भेटमा सभामुख महराले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध पुरानो र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउँदै […]
७ चैत, दाङ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा सरकारलाई नीतिनिर्देशन गर्ने ठाउँमा भएकाले आफुले निष्पक्ष भूमिका निभाउने बताए । उनले भने, “अब म पाँच वर्ष सम्मका लागि साझा व्यक्ति हुँ, कुनै राजनीति विशेषमा छैन्, म निर्दलीय भएको छु, मैले प्रतिनिधि सभामा निष्पक्ष रुपले काम […]
कृष्णबहादुर महरा : शिक्षकदेखि सभामुखसम्मको यात्रा
जन्म र पृष्ठभूमि पिता रविचन्द्र र माता समुद्रदेवीका कोखबाट वि.सं २०१५ असारमा रोल्पा, लिवाङ–७ स्थित धारापानीमा जन्मनुभएका महराको हालको स्थायी घर रोल्पा नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको छ । बालकल्याण मावि लिबाङ रोल्पाबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण महराले विज्ञान विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्जबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको हो । […]
सभामुख महराको प्रेस सल्लाहकारमा मल्ल सिफारिस
२ चैत, काठमाण्डौ । सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रेस सल्लाहकारमा डिल्ली मल्ल सिफारिस भएको छ । शुक्रबार जिल्लाका नेताहरूसहित बसेको बैठकले मल्ललार्इ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मल्ल प्रेस सेन्टर दाङका अध्यक्ष र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्ष हुन् । उनी दाङवाट प्रकाशित हुने माओवादी निकट ‘नौलो जनउभार’ साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक समेत छन् । सल्यान […]
अनुशासित भएर काम गर्न सभामुखको निर्देशन
२९ फागुन, काठमाण्डाै । संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुशासित भएर काम गर्न संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सचिवालयका कर्मचारीलाई साेमबार निर्देशन दिँदै उहाँले आफ्नो सफलतामा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । सभामुख महराले भन्नुभयो, “मलाई तपाईंहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ, राज्यको पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रुपमा तपाईंहरुले सक्रिय […]
सभामुखलाई कांग्रेसका महामन्त्री कोइरालाले बधाई व्यक्त
२७ फागुन, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सशांक कोइरालाले आज बसेको संसद बैठकलाई सम्वोधन गर्दै नवनिर्वाचित सभामुख कृष्णवहादुर महरालाई बधाई व्यक्त गरेका छन् । संसदमा कमै बोल्न रुचाउने कोइरालाले आज पनि ज्यादै थोरैमात्र खर्चेका थिए । महामन्त्री कोइरालाले रोष्टममा उभिएर सम्वोधन गर्दै जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको अनुभव लिएका महराले संसदलाई सन्तुलित ढंगले चलाउने विश्वास समेत […]